Nhau - Iko kumisikidza uye kugadzirisa kweepasi mavhavha
Kuisirwa uye kugadziriswa kwepasi rese mavhavha
Globe vharuvhu iri kushanda, ese marudzi evhavha zvikamu zvinofanirwa kunge zvakakwana uye zvisina kusimba. Bolts pane flange uye bracket yakakosha. Thread inofanirwa kuve isina kusimba uye hapana kusunungura kunotenderwa. Yekusunga nati pawhewheel, kana ikawanikwa yakasununguka inofanirwa kusimbiswa munguva, kuti isapfeke kubatana kana kurasikirwa newhewheel uye zita replate. Kana vhiri remawoko revhavha yepasi rakarasika, iyo inogadziriswa spanner haitenderwe kushandiswa panzvimbo uye inofanirwa kuve yakagadzirirwa munguva. Iyo yekurongedza gland haibvumirwe skew kana kushaya preload clearance. Chivharo chekudzivirira chinofanira kuiswa padanda revhavha yepasi rose munzvimbo iyo inoshatiswa nyore nyore nemvura, chando, guruva, jecha uye imwe tsvina. Iyo geji pavhavha yepasi rose ichave yakakwana, yakarurama uye yakajeka. Iyo chisimbiso, chivharo uye pneumatic zvishongedzo zvevhavha yepasi rinofanira kunge rakakwana uye rakasimba. Usagogodza, kumira kana kutsigira zvinhu zvinorema pavhavha yepasi iri kushanda; Asina-esimbi mavharuvhu uye kukanda simbi vharafu, kunyanya, zvakawanda zvinomisa vharuvhu pane basa rekugadzirisa mukugadzirwa kwekugadzira kugadzirwa pamberi uye mushure mevharuji nyanzvi yekuchengetedza, yevhavha iri mubasa rekugadzira mashandiro anoita basa rakakosha, kurongeka uye kushanda kwakanaka. inodzivirira kurudyi vharafu, vharafu kuti ishande nemazvo, uye nekurebesa hupenyu hwehupenyu hwevhavha. Kugadziriswa kwevhavha kungaratidzika kunge kuri nyore, asi hazvisi. Iko kunowanzo kuve nekuregeredzwa mativi ebasa.
Kutanga, kana vharafu repasi rose richizora, dambudziko rejekiseni regirizi rinowanzo kufuratirwa. Mushure mekuzadza mafuta, mushandi anosarudza vharuvhu uye girisi yekubatanidza maitiro uye anoita girisi yekuzadza mashandiro. Pane mamiriro maviri: kune rimwe divi, huwandu hwesirin'i yemafuta ishoma, uye iyo yekuisa chisimbiso pamusoro inopfekwa nekukurumidza nekuda kwekushayikwa kwemafuta. Kune rimwe divi, jekiseni rakawandisa remafuta, zvichikonzera kuraswa. Iko hakuna kukarukureta chaiko kweiyo yekukwanisa kugona kweakasiyana mavhavha mavhavha zvinoenderana nerudzi uye chikamu chevhavha. Iko kugona kwekuisa chisimbiso kunogona kuverengerwa nehukuru uye chikamu chevhavha yakatemwa, uyezve huwandu hwakazara hwemafuta hunobayiwa.
Chechipiri, dambudziko rekumanikidza rinowanzo kufuratirwa kana vharafu repasi richizora. Munguva yegirisi jekiseni kushanda, iyo girisi jekiseni kumanikidza kunochinja nguva zhinji nepamusoro uye nemipata. Iko kumanikidza kwakanyanya, chisimbiso chinodonha kana kukundikana, kumanikidza kwakanyanya, muromo wemafuta wakavharwa, mafuta ari muchisimbiso akaomeswa kana rin'i yekuvhara yakavharwa nebhora revhavha uye ndiro yevhavha. Kazhinji, kana girizi yekumanikidza yakanyanya kuderera, girisi rakabayiwa rinoyerera richienda pasi pekamuri yevhavha, iyo inowanzoitika mumavharuvhu madiki ekunhuwa. Uye girisi yekumanikidza yakanyanya kukwirira, kune rumwe rutivi, tarisa girizi bhaizi, uye woitsiva kana gomba remafuta rakavharwa; Kune rimwe divi ndiko kuomarara kwe lipid, kushandisa iyo yekuchenesa mvura, kudzikamisa kakawanda kutadza kwekuisa mafuta, uye jekiseni girisi idzva. Uye zvakare, iyo yekuisa chisimbiso mhando uye yekuisa chisimbiso zvinhu zvinokanganisawo girisi kumanikidza. Mafomu ekusimbisa akasiyanasiyana ane girisi yekumanikidza. Muzhinji, iro girisi kumanikidzwa kwesimbi rakaomarara rakakwirira kupfuura iro nyoro chisimbiso. Kugadziriswa kwekuverenga kweBhora kunowanzo kuve pachena, mamiriro akasarudzika anosarudza kuvhara kugadzirisa. Mamwe mavhavha haagoni kuve ese ekuvhura chinzvimbo. Ivhavhavha yesuwo inofanirwa kuvharwa panguva yekugadzirisa kuona kuti girizi izere nekuisa chisimbiso groove padivi pekuisa chisimbiso. Kana yakavhurika, iro rekuisa mafuta rinowira rakananga munzira yekuyerera kana mukamuri yevhavha, zvichikonzera marara.
Mushure mekumisikidza, vharuvhu yepasi rose inofanira kuongororwa nguva nenguva. Huru zvinhu zvekutarisa zvinotevera:
(1) kuvhara kwepasi kupfeka kwevhavha yepasi.
(2) Trapezoidal tambo yekupfeka yehunde uye hunde nzungu.
(3) Kunyangwe kurongedza kuri kwechinyakare uye kusiri kushanda. Kana ikakuvara, inofanira kutsiviwa nenguva.
(4) mushure mekugadzirisa uye kuungana kwevhavha yepasi rose, iyo yekuisa mucherechedzo kuita bvunzo kunofanira kuitwa.